Masinina fanamafisam-peo avo lenta matetika
Home / Applications / Induction Heating / Fanamafisana ny tariby vy
Sokajy: Induction Heating Tags: mividy fanamafisam-po fanamafisana, fifehezana hafanana fampidirana, induction tempering, fanamafisam-peo fanamafisam-peo, dingana fampidinana fampidirana, induction tempering, vy mifehy, ambonin`ny hatezerana, heater amin'ny toetr'andro ambony, tempering, fampitaovana fampitaovana, fizotrany fizotrany, induction fanamafisam-peo
Fampiharana Steel Wire Tempering Procee Application
Inona no atao hoe fanasitranana?
Fanamafisana induction dia fizotran'ny fanafanana izay manatsara ny toetra mekanika toy ny hamafiny sy ny fikojakojana amin'ny sangan'asa izay efa nohamafisina.
Izahay dia miantoka ny kalitao avo lenta, ny fihodinana haingana, ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara ary ny vidin'ny fifaninanana.
HLQ dia mpitarika ao amin'ny indostrian'ny fitsaboana hafanana mampiditra karazana serivisy fitsaboana hafanana, ao anatin'izany ny fifehezana ny induction, any Shina. Ny fifehezana induction dia fizotran'ny fitsaboana hafanana mahazatra aorian'ny vita ny fizotran'ny fanamafisana. Izy io dia tanterahina amin'ny mari-pana ambany kokoa noho ny fizotran'ny fanamafisana ny induction mba hahatratrarana ny hamafin'ny tadiavina na hampihenjana ny ampahany amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fikojakojana. Ny fanamafisana ny vy amin'ny induction dia matetika amin'ny alàlan'ny haavo ambany mba hamokarana valiny segondra mitovy amin'ny fampiharana ny famaohana lafaoro izay matetika maharitra ora maro.
Ny fanamafisana induction dia azo ampiharina amin'ny fizotrany tsy tapaka izay anomezana ny tahiry tariby amin'ny alàlan'ny coil induction amin'ny hafainganam-pamokarana.
Material: Tady vy 3mm ka hatramin'ny 12mm savaivony
Temperature: 1922 ° F (1050 ° C)
Fitaovana fanamafisana induction: DW-UHF-60 kW, 100 kHz rafitra fanamorana ny induction, miaraka amina workhead lavitra misy capacitors valo 1.0 μF ho an'ny 2 μF
- Coil fanafanana induction telo natao sy novolavolaina manokana ho an'ity rindrambaiko ity handrakofana ny tariby tariby
Ny tahiry tariby dia ampiasana amin'ny coil helical efapolo refy amin'ny 6 metatra / minitra, hahatratra ny mari-pana tadiavina hahomby amin'ny fizotran'ny fikolokoloana. Ny coil helical 20 mitovy dia ampiasaina amin'ny savaivon'ny tariby lehibe indrindra
mitaky fikojakojana ireo tsipika famahanana 6 ho ao anaty lafaoro misy lasantsy miaraka amina famindrana hafanana mahamenatra ao anaty tariby misy savaivony kely kokoa. Ny induction dia mitaky angovo 50% kely kokoa ary mampihena ny dian-tsipika famokarana hatramin'ny 90%
- hafanana mivantana ao anaty tariby, mamonjy angovo sy fotoana
- fampidirana mora amin'ny tsipika famokarana, fanatsarana ny fidirana
- fanaraha-maso marina ny hafanana
- na ny fizarana hafanana ao anatin'ny tariby aza
Ny fifehezana induction dia miasa betsaka amin'ny indostrian'ny fiara mba hifehezana ireo singa henjana ambonin'ny tany toy ny hazo, bara ary tonon-taolana. Ny fizotrany dia ampiasaina koa amin'ny indostrian'ny fantsom-by sy ny fantsom-panafody mba hahasosotra ireo sanganasa vita mafy. Inditing indraindray dia tanterahina ao amin'ny gara mihamafy, amin'ny fotoana hafa amin'ny foibe iray na maromaro miserana.
Fa maninona no ampiasaina ny fifehezana induction?
Ny dingam-panafody fampidiran-tsika dia miteraka valiny haingana. Ny fanamafisana ny vy vy mihamafy dia asan'ny fotoana sy ny mari-pana. Ny fifehezana induction dia mampiasa fotoana fohy kokoa (matetika ny segondra vitsy monja) ary ny mari-pana avo kokoa mba hamokarana valiny mitovy amin'ny fitsaboana amin'ny lafaoro izay mitaky ora maro. Ny fifehezana induction dia azo tanterahina amin'ireo singa mafy fo rehetra. Ny vokatra dia singa iray miaraka amin'ny fitomboan'ny hamafiny, ny fikojakojana ary ny tanjaky ny fiatraikany.
Ny tombony lehibe an'ny induction tempering dia hafainganam-pandeha. Ny fampidirana dia afaka manelingelina ny sangan'asa amin'ny minitra, indraindray na dia segondra aza. Ny famonoana lafaoro matetika dia maharitra ora maro. Ary, satria ny tempering induction dia tonga lafatra amin'ny fampidirana inline, dia mampihena ny isan'ny singa ao anatin'ilay fizotrany. Ny fifehezana induction dia manamora ny fifehezana kalitao ny sangan'asan'ny tsirairay. Ny tobim-pahatezerana miharo fampidirana dia mitahiry ihany koa toerana malalaka.
Ireo reactors amin'ny fanafanana indostrialy